Hadda waad keydin kartaa AirBuddy 2 barnaamijka saxda ah ee AirPods ee Mac | Waxaan ka socdaa mac
Hadda waxaad horay u dalban kartaa AirBuddy 2, barnaamijka saxda ah ee AirPods ee Mac
Kadib ku dhawaad ​​sanad Maaddaama AirBuddy ay la jaan qaadi karto macOS Catalina iyo AirPods Pro, waxaan haynaa nooca labaad ee barnaamijka. AirBuddy 2 hadda waa laga sii iibsan karaa iyada oo loo marayo degelkeeda rasmiga ah Oo weliba weli waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee halkaa ka jira oo ah isku-darka dhegeysigeenna Apple wireless-ka ee Macs-ka.
AirPods waxay isla markiiba ku xirmaan iPhone, iPad, iyo Apple Watch. Si kastaba ha noqotee, Mac-da waa inaan ku xirnaa iyaga sida haddii ay yihiin qalab kale oo Bluetooth ah. In sidan, qaar ka mid ah rafcaanka iyo ku habboonaanta ayaa ku lumay soo-jeedinta wireless-ka ee Apple.
AirBuddy oo uu soo saaray Guilherme Rambo, ayaa u yimid inuu xalliyo dhibaatooyinkan yar. Barnaamij yar oo abuurahiisa u sameeyay mashruuc isaga u gaar ah, isla markaana uu arko guushiisa, ayuu go’aansaday inuu gacanta u geliyo dadweynaha. Qiimaha ayaa tan iyo markii uu kacay. Waxaan ka soo gudubnay qiyaastii 5 euro oo aan u gudubnay Qiimaha hadda ah 10,43 oo ay ku jiraan VAT.
AirPods waxay la shaqeeyaan Mac sida ay ula shaqeeyaan aaladaha kale ee Apple. Markaad furto kiiska samaacadaha dhagaha ku xiga Mac, waxaan arki karnaa xaalada hada taagan oo isku mid ah. Hal guji oo keliya, ayaa isla markiiba isku xidhi doona oo ka ciyaari doona codkaaga Mac-ga ah iyada oo loo marayo AirPods-kaaga. Dhaqdhaqaaqyo awood badan iyo otomatig ayaa noo oggolaanaya inaan isku xirno oo aan beddelno habka dhageysiga, aqbashada makarafoonka, iyo mugga wax soo saar, iyada oo aan la furin Nidaamka Xulashada ama menu-ka Bluetooth.
Kuwani waa warka ka soo cusbooneysiinta AirBuddy:
Muuji xaaladda aad AirPods Pro ama sameecadaha kale ee Apple iyo Beats markay ku ag dhawaadaan Mac-gaaga.
Ku xir iyo beddel habka dhageysiga ee AirPods Pro iyadoo hal tilmaan lagu dhajinayo dariiqa loo yaqaan 'trackpad'.
Wuxuu muujinayaa xaaladda iyo baytariyada dhammaan aaladdaada Apple iyo Beats marka la jaleeco liiska barta xaaladda, oo ay ku jiraan iphone, ipad, Apple Watch iyo Macs kale
Si dhakhso leh ugu xir AirPods, u kala beddel hababka dhageysiga, iyo inbadan adoo adeegsanaya menu-ka xaaladda ama kabadhada kiiboodhka
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Hadda waxaad horay u dalban kartaa AirBuddy 2, barnaamijka saxda ah ee AirPods ee Mac
Mashruuca Saldhigga Charging AirPower wuu socdaa si wanaagsan
Muuqaalka filimka taxanaha ah ee Noqoshada hadda waxaad ka arki kartaa YouTube-ka